Ku noqo Maalgelinta Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Sabtida, Janaayo 20, 2018 Axad, Janaayo 21, 2018 Douglas Karr
Baraha bulshada ayaa lahaa balanqaad aan caadi aheyn oo ah dhexdhexaad si loo kobciyo xiriirka ka dhexeeya macaamiisha ama macmiilka iyo ganacsiga bixiya wax soo saarka ama adeegga. Shirkado badan ayaa isla markiiba ku booday markabka laakiin ROI waa laga baxay maadaama aysan inta badan ku dhamaan dakhli toos ah ama toos ah.
Kahor intaadan dejin barnaamijkaaga bulshada guusha, waxaa muhiim ah in la fahmo waxa howlahu run ahaantii ku wadaan ROI bulshada. Ma suuqgeyn ayay ka kooban tahay, aragti bulsheed, mise u ololeyn iyo u doodid iyo haynta sida adeegga macaamiisha bulshada? Salesforce waxay ku midoobeen Altimeter ilaa daabac daraasad diiradda saareysa mowduucan, ROI ee maaraynta warbaahinta bulshada.
Natiijooyinka ka soo baxay cilmi-baaristu waxay aasaaseysaa inay jirto dib-u-soo-celin maalgashi loogu talagalay dadaallada warbaahinta bulshada, laakiin waxaa lagu aasaasay labadaba hufnaan iyo biseyl. Waxtarka waa lagama maarmaan maxaa yeelay sameynta istiraatiijiyad warbaahinta bulshada ah waxay u baahan tahay is-dhexgal iyo otomatig u sameynta jadwalka, maaraynta, kormeerka, iyo ka jawaab celinta dhacdooyinka warbaahinta bulshada.
Qaan-gaadhnimo ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo inay jirto geeddi-socod la maareeyey oo meesha ka jira si loo kordhiyo ka-qaybgalkaaga warbaahinta bulshada ee soo socota oo si sax ah loo cabbiro saamaynteeda. Xaqiiqdii, ROI ee warbaahinta bulshada, sida lagu cabiray shirkad natiijada dhiirrigelinta net, labanlaabmay bislaansho.
Hubi macluumaadkooda, ROI ee Maareynta Warbaahinta Bulshada, si loo fahmo waxa xeeladaha bulshada ay u wadaan ROI-da bulshada iyo shaqeynta aad uga baahan tahay barxad bulsheed si aad ugu fiicnaato.
Tags: ku soo noqo maalgashigaku noqo warbaahinta bulshadaku noqo maalgashiga warbaahinta bulshada
Istaraatiijiyadaha warbaahinta bulshada iyo yoolalka ayaa u kala duwan ganacsi kasta. In kasta oo ganacsiyada qaarkood laga yaabo inay ogaadaan in warbaahinta bulshada ay tahay meel fiican oo lagu qabto tartamo ama lagu dhajiyo qiimo dhimis, taasi ma noqon karto tallaabada saxda ah ee dhammaan ganacsiyada. Waa muhiim inaad daacad u ahaato astaantaada astaanta.
Jan 26, 2012 saacadu markay ahayd 4:42 PM
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, @nickstamoulis: disqus! Waxaana u maleynayaa mararka qaarkood inaan diirada saarno ROI si aan qiil ugu helo dinaar walbana uma baahnin. Mararka qaar way fududahay in la helo magacaaga halkaas adigoon filayn in doolarku da'ayo!
Wow, xogtan ayaa ah mid aad u faa'iido badan oo xiiso leh. Aad baad u mahadsantahay!
Warbaahinta bulshada runtii waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, ee si ballaadhan loo adeegsado warbaahinta suuqgeynta maalmahan.